विभिन्न परिस्थितिमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
विकिरण, धूलो, जीवाणुहरू: विभिन्न अवस्थामा मानव शरीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका उजागर गरिएको छ। त्यसैले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मानिसहरूको लागि प्रतिकूल अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो आविष्कार। तिनीहरूलाई ज्ञान समावेश सुरक्षा निर्देशन धेरै उद्यम मा।
छाला र श्वास प्रणालीको लागि: व्यक्तिगत र सामूहिक सुरक्षाको हालतमा दुई प्रकार मा विभाजित छन्। इन्सुलेट र फिल्टरिङ: कार्य को सिद्धान्त अनुसार एक वर्गीकरण पनि त्यहाँ छ।
यसरी, पूर्ण पहिलो प्रकार कुनै पनि बाह्य प्रभाव देखि एक व्यक्ति सुरक्षित राख्दछ। नियम, यो impermeable सामाग्री बनेको सूट।
हावा फिल्टर आवश्यक व्यक्ति राम्ररी सफाई जान्छ। उदाहरणका लागि, द्वारा कार्बन सक्रिय भयो।
निर्माण मा प्रयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
सर्वश्रेष्ठ मानव सुरक्षा गर्न ताकि सबै निर्माता वस्त्र बनेको छ। pockets, धेरै zippers: यो कुनै superfluous विवरण छ। सबै व्यावहारिक र सुविधाजनक Makimalno। साथै, लुगा बनाउने कपडा थप तह छ, यो अचानक मौसम परिवर्तन देखि सुरक्षा।
साथै, हेलमेट प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले अक्सर बेवास्ता गर्दै हुनत, तर तथ्याङ्क देखाउन जीवन को एक विशाल संख्या तिनीहरूलाई धन्यवाद सुरक्षित गरिएको छ। मास्क पनि हामी धूलो सामना गर्न छ भने, वेल्डिंग मास्क काम गर्न प्रयोग गरिन्छ। पनि निर्माता को जूता विरोधी-पर्ची कोटिंग बनाइएको छ।
प्रयोगशालाहरुमा प्रयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
न्यूनतम उपकरण आवश्यक टेक्नीसियन को सेट: रबर पन्जा, टोपी र गाउन। त्यहाँ जैविक सामाग्री स्प्रे को एक खतरा छ भने, त्यसपछि oilcloth एप्रन, चश्मा र मास्क लागू हुन्छ।
Overalls एक हप्ताको2पटक परिवर्तन भयो। आपतकालीन को घटना, तुरुन्तै भने। कुनै पनि जैविक सामाग्री को वर्दी संग सम्पर्क को मामला मा, यो disinfected हुनुपर्छ।
बिजुली आघात विरुद्ध व्यक्तिगत सुरक्षा
आफ्नो इरादा मर्मत वा एक घर मा ताराहरु प्रतिस्थापन गर्न छ भने, यो आफूलाई जोगाउन आवश्यक छ। पहिलो, एक headdress राखे। त्यसपछि dieletricheskie पन्जा। तिनीहरूले बाक्लो र रबर हुनुपर्छ। अर्को चरण ह्यान्डलहरू पृथक छ जो उपकरण, को चयन छ। निस्सन्देह, हामी बाक्लो तलवों र संग जूता बारेमा बिर्सनु हुँदैन रबर चटाई काम गर्दा खडा जो मा।
तपाईं पूर्ण पिन हटाउनु आवश्यक छ कि सम्झना वर्तमान कदम चाल्न। उहाँलाई लागि, सञ्चालकको वस्तुतः कुनै पनि सतह सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी सधैं वातावरण मा वायु गुणस्तर को स्वतन्त्र सास फेर्न किनभने हाम्रो फोक्सोमा, विशेष सुरक्षा आवश्यक छ। तसर्थ, हाम्रो साँस सुरक्षित हुनुपर्छ। फ्लू महामारी - अनिवार्य मास्क, कम्तिमा gauze पट्टी। धूल क्षेत्रमा वा जहाँ मा कक्षाहरू त्यहाँ मजबूत odors छन् - आवश्यक respirator। आगो र रासायनिक काम को मामला मा मास्क प्रयोग। हो, श्वसन सुरक्षा Paramount छ।
सुरक्षा को माध्यम मा दक्षिणी देशहरूमा पनि लामखुट्टे जाल समावेश गर्नुहोस्।
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली: वर्गीकरण, डिजाइन, उपकरण
राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र कुनै पनि राज्य यसको महत्व
नयाँ प्रविधि अनुहार सुविधाहरू द्वारा भविष्यमा अपराधीहरूलाई पहिचान गर्न सम्भव बनाउँछ
सानो मुसा किरा: Moles एक षड्यन्त्र कसरी उठाउन गर्न
कसरी बोल्ड बन्न?
अग्न्याशय कहाँ छ?
म रूसी नागरिक गर्न पेरिस एक भिसा चाहिन्छ?